Thwebula Tunngle 5.8.3 – Vessoft
Inethiwekhi, Internet, Imidlalo
Tunngle – a isofthiwe ukwakha inethiwekhi yendawo ngokusebenzisa internet. Isofthiwe ihlanganisa computer ezixhunywe inthanethi futhi kwenza abasebenzisi ukuxhuma kumanethiwekhi yokudlala ehlukene ahlukaniswe izigaba futhi izinhlobo. Tunngle ikuvumela ukudala amaphrofayli, imiyalezo exchange bese upheqa yokudlala last embonini izindaba. Isofthiwe futhi kwenza ukwakha amanethiwekhi ezizimele ivikelwe iphasiwedi. Tunngle iqukethe inqwaba amathuluzi ngokwezifiso ukuboniswa ukukhangisa, ongakhetha kanye nokuvela software.
Dala inethiwekhi yendawo ngokusebenzisa internet
Dala inethiwekhi evikelekile
Inqwaba amathuluzi ukumisa
Amazwana on Tunngle:
Tunngle Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Wireshark 2.2.3 Standard futhi Portable
English, Français, Español, Deutsch... GoodSync 9.9.61.1 Standard futhi Portable
Development The izinkanyezi desktop ukubuka isibhakabhaka esinezinkanyezi in 3D. Isofthiwe inikeza okusezingeni ukubonisa izinga ezinkanyezi ezahlukene, izinkanyezi kanye nezinye izinto emkhathini.